Ruzivo rwekufungidzira ndi1.44, nzvimbo inonyungudika iri 3730-3830 ° C, coefficient yekuwedzera kwekushisa ndeye 8.3 × 10-6, elastic modulus is 291GPa, coefficient of thermal conductivity is 0.22j / cm · S · C.
Yakanaka makemikari kugadzikana, isingasviki mune acids. Yakasimba antioxidant chinzvimbo. TaC inowanzogadzirwa kubva kune tantalum pentoxide uye kabhoni nhema mune inert kana kudzikisira mhepo kuburitsa hupfu hwemhangura.
multi-phase ceramics ndeimwe yezvinhu zvakagadzirwa zvemazhinji-chikamu zvedongo zvigadzirwa. Iyo yakawanda-chikamu zvedongo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinowanzo kuve zvakakura mukuomarara, yakakwira yekunyungudusa poindi, yakanakisa makemikari kugadzikana uye kuitisa basa Iyo inoshandiswa mune inopfeka-isingagadzirike zvikamu, maturusi ekucheka uye maelektrode.
inoshandiswa zvakanyanya mukumwaya, ekushandisa ekucheka maturusi, hupfu hwesimbi uye zvigadzirwa zvecermet.
Iva nehutano hwakanaka hwemakemikari uye yakanyanya kupisa tembiricha Inoshandiswa mune yakaoma firimu, tarisheni, zvekushandisa zvekumwaya, kupuruzira, maturusi ekucheka, indasitiri yesimbi, muchadenga uye mimwe minda. Seyesimbi ceramic uye tungsten-yakavakirwa carbide alloy zviyo yekunatsiridza mumiriri, inogona zvakanyanya kugadzirisa iyo alloy performance
Inoshandiswa mukugadzira simbi senge chinogadzirisa uye kugadzirwa kwemethane.
Aluminium carbide inowanzo shandiswa sechiwedzera kuwedzera simba rezvinhu zvitatu zvealuminium base (al-Si-ALC, al-AlTI-ALC). Uye zvakare, AlC chinhu chakakosha chikamu mumunda wesimbi-aluminium indasitiri tekinoroji.
Kugadzirwa kwemanganese hydroxide, hydrogen uye mahydrocarbon uye upfu hwesimbi yekuwedzera
yakanyunguduka poindi, kukwirira kuomarara, IS yakanakisa anti-corrosion hunhu hwezvinhu zvitsva zvinoshanda, zvave zvichishandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana siyana tembiricha, abrasion uye chemakemikari ngura uye mamwe minda. Iine asimilar inokosha simbi yemagetsi mamiriro uye zvinobatsira zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mukuita kwakanangana nehydrojeni senge alkane isomerization, isina kugadziriswa hydrocarbon hydrogenation, hydrodesulfurization uye denitrification maitiro eakaomesesa-akaomarara maturusi zvinhu, zvinopfeka zvinodzivirira zvinhu, zvinopisa zvinhu uye yakanyanya-tembiricha masisitimu.
inoshandiswa mukugadzirira kwemhando yepamusoro-soro minda yakadai seyakakwira-kuita yakamisikidzwa carbide, aerospace, simba reatomiki, textileelectronics, kupfeka, yakaoma firimu uye metallurgia kushandisa michina. Iyo nyowani carbonomposite inoshanda matenals inogona kusimudzira yakanyanya tembiricha ngura kuramba kwemishonga yayo, kukwirira kuomarara kwenzvimbo dzakanyunguduka matenals uye yakanakisahigh tembiricha inomutsa matenals, rocket injini inoshandiswa seyakaomarara propellantraw matenals kusvibiswa, yakaderera okisijeni zvemukati